Instagram ကို APK ကို Android အတွက် Download | အဆိုပါလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယို App ကိုရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Instagram ကို
Instagram ကိုကမ္ဘာ့အချိန်လေးကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှတက်နေအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုလိုက်နာပါ, သင်ကိုချစ်သောအရာတို့ကိုဝေမျှဖြစ်ကြောင်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအကောင့်တွေ့ရှ။ သန်း 500 ကျော်လူများ၏အသိုင်းအဝိုင်း join နှင့်သင့်တစ်နေ့တာအပေါငျးတို့သအချိန်လေးမျှဝေအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြ - လည်း, အကြားမှာရှိတဲ့ပျေါလှငျနဲ့အရာအားလုံးကို။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက Instagram ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ မတ်လ 2018 အတွက်ထုတ်ဝေသောစာရင်းများအရ Instagram ကိုအပေါ်သန်း 800 ကျော်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည်ရှိကြ၏။ ဒါကကိုယ့် Instagram ကို၏တန်ခိုးကိုပြသလိုက်မသွားဘူးဒါပေမယ့်လည်းသင်ဤလျှောက်လွှာတွင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်များ၏အလားအလာပြသထားတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုကူညီကျနော်တို့ Instagram ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုစာရင်းရှိသည်။
အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိခြင်းစေရန်အဆိုပါလမ်းညွှန် - Instagram ကိုအသုံးပြုပါရန်မည်သို့
လျှောက်ထားခြင်းစိစစ်မှုများ: Instagram ကိုပထမဦးဆုံးစတင်သောအခါ filter များ၏အကွာအဝေးအလွန်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ app ကို features တွေအများကြီးထည့်သွင်းထားပြီးသုံးစွဲသူ app ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြခန်းများမှတဆင့်ဓာတ်ပုံ post နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပိုဆောင်းထားသော filters ရွေးချယ်စရာတန်ချိန်ရှိပါတယ်။ သင်ကအရောင်အဝါ, ဖွဲ့စည်းပုံ, အဆနျ့ကငျြဘများနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုပို့စ်တင်ပေါ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးအဖုံးဘောင်ရှိခြင်းစဉ်းစားပါ။ အသုံးပြုသူများကိုလည်းဗီဒီယိုကိုချုံ့နိုင်ပါတယ်။ app ကို၏အသုံးပြုသူ-interface ကိုအလွန်အလိုလိုသိနှငျ့သငျမှာအားလုံးအချိန်မအတွက်နားလည်ပြီးသင်၏ဓါတ်ပုံများတည်းဖြတ်နှင့်ပို့စ်တင်မစတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်! အခွားသောတည်းဖြတ်ရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာများနွေးထွေးမှု, ပျေါလှငျ, Vignette, ရွှဲ, နွေးထွေးမှု, ပြတ်သား, နှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်ညှိပါဝင်သည်။
သင့်ရဲ့ Instagram ကိုစာတိုက်မျှဝေခြင်း: ယခုသင်သည် filter များနှင့်တည်းဖြတ်နှင့်သင်၏ရုပ်ပုံတက် prettied ပြီကြောင့်ပို့စ်အဘို့အဆင်သင့်ပါ! အဲဒါကိုအုပ်စုတစ်စုရုပ်ပုံလွှာသည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပါ tag နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများကိုလည်းတည်နေရာတစ်ခု tag နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်မြင်ကြတစ်ဦးကကောင်းတဲ့ feature ကိုပို့စ်တင်နေစဉ်, သင်သည်မည်သည့်အပိုအားထုတ်မှုမပါဘဲအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်မှာပို့စ်ကို enable နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ pic ကိုမှ hashtags ကိုနှင့်ဖော်ပြချက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ posted ပြီးတာနဲ့ကြည့်ရှုဓာတ်ပုံအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မ, သင်ကတည်းဖြတ်ချင်လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည်။
Instagram ကိုဓါတ်ပုံတင်နှင့်အခြားသူများကြည့်ရှုအကြောင်းကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပွညျ့အဝမှဘဝအသကျရှငျနကွေသနညျး သငျသညျဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုယူနှင့်သင့်ပုံပြင်တွေအဖြစ်သူတို့ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်သည်ဤ 24 နာရီအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင်, သင်၏မိတ်ဆွေများ '' ပုံပြင်များရှုမြင်သင့်ရဲ့ပုံပြင်များပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကို tag, စာသားများထည့်တောက်ပနေ, GIF များနှင့်, jazz တက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး left သို့မဟုတ်ညာဘက်သင်အကောင်းဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သောတဦးတည်းကိုရှေးခယျြအားပွတ်ဆွဲရန်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
Instagram ကို၏သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
အတိအကျအသိပေးချက်များ Get ဖို့ရှေးခယျြ
သင်အကြိုက်ဆုံး instagrammers posted သောအခါသင်သာသိကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ကအထူးအသိပေးချက်များကိုချင်ပါသလား ထိုမေးခွန်းကိုအဖြေဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် အကယ်. သင်ကအထူးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အသုံးပြုသူများအတွက်အပေါ်နဲ့ off အသိပေးချက်များကိုလှည့်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရုံ, အလိုရှိသောပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသုံးယောက်အစက်ပေါ်နှိပ်ပါ, '' post ကိုအကြောင်းကြားစာများပေါ်တွင်အလှည့် '' ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ဇီဝအထူး Fonts အသုံးပြုခြင်း
သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်ချင်လျှင်သင်သည်သင်၏ဇီဝအထူးစာလုံးတွေသုံးပြီးကြောင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အားအထူးစာလုံးတွေထည့်သွင်းဖို့သင်ရုံသင်တစ်ဦး Third-party application ကိုသင်၏အထဲမှာဇီဝအတွက်ချင်တယ်ဘာပဲရိုက်အဲဒီမှာကနေ copy-paste ။
သင်သည်သင်၏ဇီဝအချို့နဲ့အခြားအထူးအက္ခရာများကိုထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်လည်းအဲဒီလိုလုပျနိုငျသညျ။ ရုံသင်သည်သင်၏ဇီဝအတွက် add ရန်ဆန္ဒရှိသောဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေတဲ့ Third-party application ကို install လုပ်ပါ။ သငျသညျထိုဇာတ်ကောင်များပြီးတာနဲ့ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ဇီဝဖို့က paste နှင့်သင်ပြုလေကော်ပီကူး။
ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ယခု option ကို '' APK ကို Download လုပ်ပါ '' ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဤအကြံပြုချက်များနှင့်ပရိယာယ်ကိုစတင်သုံးစွဲ!
မှ Instagram ကိုအသုံးပြုပါ:
• Post ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသင့်ပရိုဖိုင်းကိုဇယားကွက်ပေါ်မှာသိမ်းထားချင်။ filter များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု tools တွေကိုသူတို့နှင့်အတူပြင်ရန်နှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မျိုးစုံကလစ်များပေါင်းစပ်။
• (သင်ချင်သကဲ့သို့အများအပြား!) ဝေမျှမယ်မျိုးစုံဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စာသားနဲ့ပုံဆွဲရေးကိရိယာများနှင့်အတူဘဝကိုထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။ သူတို့ဟာ 24 နာရီအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွားနှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုဇယားကွက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အစာကျွေးခြင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
•အခုသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်နောက်လိုက်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တိုက်ရိုက်သွားပါ။ သင်ပြုသောအနေတဲ့အခါမှာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပုံပြင်များပျောက်ကွယ်သွား။
• Instagram ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အတူအဖွဲ့များနှင့်မိတ်ဆွေများကသင်၏အစာကျွေးခြင်းကနေပျောက်ကွယ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပို့စ်များကိုပို့ပါ။
•သင်သည်သင်၏အစာကျွေးခြင်း၏အပေါ်ဆုံးမှာ bar မှာအတိုင်းလိုက်နာသည်လူများအနေဖြင့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပုံပြင်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများ။
•သင် Explore tab ကိုအသစ်အကောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်နောက်တော်သို့လိုက်စေခြင်းငှါ, Discover ပုံပြင်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ။
နယူး: သင် Instagram ကိုအပေါ်တယောက်ပို့စ်တွင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ 10 မှတက်မျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ feed ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါ * သင်မျိုးစုံဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို select အသစ်အိုင်ကွန်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
* တဦးတည်းအားဖြင့်တကြိမ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်တဦးတည်းမှာအရာအားလုံးကိုတစ် filter ကို Apply ။
ဒီ feature ဟာလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်တကမ္ဘာလုံးထုတ်လှိမ့်ပါလိမ့်မည်။
34 ကို MB
InFrame - ဓာတ်ပုံ ...
ဘယ်လောက်မှအပေါ်6နည်းလမ်းများ ...
လက်ငင်း Download ...
ကင်မရာ Instagram ကို Download လုပ်ပါ Instagram ကို instagram apk Android အတွက် Instagram ကို
Saqii babu says:
မေလ 22, 2018 မှာ 1: 13 ညနေ
ငါ instagram ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်အများဆုံး snappchat likes
ဧပြီလ 9, 2018 မှာ 8: 45 ညနေ
ဧပြီလ 9, 2018 မှာ 8: 40 နံနက်
ငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံး app ကို instagram ကြိုက်တယ်
Shadman Shahriar says:
မတ်လ 22, 2018 မှာ 2: 16 ညနေ
ငါ intagram ချင်ပေမယ့်ကျွန်မအမေဇုံမီးကို iOS tablet ကိုရှိ
မတ်လ 16, 2018 မှာ 3: 23 နံနက်
Shristi Chourasia says:
ဇန်နဝါရီလ 15, 2018 မှာ 10: 59 ညနေ
ငါကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် instagram ကြိုက်တယ်
ဇန်နဝါရီလ 15, 2018 မှာ 10: 56 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 9, 2017 မှာ 9: 30 ညနေ
ကျွန်မသဘောကျတယ် Instagram ကို
ဧလိယ Gadisa says:
ဇူလိုင်လ 5, 2017 မှာ 9: 27 ညနေ
ဒီ Amazing ဖြစ်ပါသည်
ဇွန်လ 14, 2017 မှာ 4: 34 နံနက်
ကောင်းသော site ကိုကျေးဇူးတင်စကား
ဇွန်လ 8, 2017 မှာ 10: 29 နံနက်
ကျွန်မအမေဇုံတက်ဘလက်က၎င်း၏ apk & Google Play စတိုးကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲ plz ငါ့ကိုပြောပြပါမဟုတ်လော
နိုဝင်ဘာလ 21, 2017 မှာ 4: 04 ညနေ
ငါသည်လည်းအမေဇုံတက်ဘလက်ရှိသည်, ဦးလည်းဤပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရ ..are ယခုငါမဆိုစတိုးကနေမဆို app ကိုဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သလဲ
မေလ 20, 2017 မှာ 6: 34 ညနေ
ငါ Laptop ကိုအပေါ်ကို download လုပ်ပါချင်
မေလ 29, 2017 မှာ 6: 41 ညနေ
အပြာ stack ကို download လုပ်ပါ
မိုဟာမက် Sharif khaskheli says:
ဧပြီလ 27, 2017 မှာ 10: 28 နံနက်
Raja vishal says:
မတ်လ 13, 2017 မှာ 9: 59 နံနက်
Instagram ကိုငါ့မျက်မှောက်၌အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2017 မှာ 1: 16 ညနေ
Instagram ကအရမ်းအကောင်းဆုံးလူမှုရေး App ဖြစ်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 15, 2016 မှာ 10: 19 နံနက်
ငါသည်ဤ site မှ instagram ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေမယ့်ကိုယ်ကဖွင့်လှစ်သွားရသည့်အခါက app ကိုဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်
မတ်လ 26, 2017 မှာ 10: 54 ညနေ
သင်၏ဖုန်းဗားရှင်းအနိမ့်သည် ဖြစ်. ...
Nyasha tobaiwa says:
ဇွန်လ 6, 2017 မှာ 3: 05 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 8, 2016 မှာ 7: 53 ညနေ
nice ဈကြိုက်တယ် instagram
Bridget Hendrickson says:
အောက်တိုဘာလ 27, 2016 မှာ 6: 56 ညနေ
မင်္ဂလာပါ ငါမေးရန်လိုအပ်သို့သော်ဒီလိုမျိုး၏ချွတ်-ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အလုပ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုယူကဲ့သို့သောကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဘလော့ဂ် running ပါသလား? ကျွန်မဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းမှလုံးဝအသစ်အဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ငါနေ့တိုင်းငါ့အဂျာနယ်ထဲမှာရေးလိုက်ပါနဲ့။ ငါအွန်လိုင်းငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အမြင်များကိုမျှဝေနိုင်အောင်ဘလော့ဂ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်။ သငျသညျအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအယောင်ဆောင်ဘလော့ဂါများအဘို့မဆိုအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အကြံပေးချက်များရှိပါကငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ပေးပါ။ ကလေးမွတျ!
ဇွန်လ 22, 2016 မှာ 7: 13 နံနက်
Shani Chadhar says:
မေလ 24, 2016 မှာ 3: 09 ညနေ
ဒါဟာကောင်းသောက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ထိုအရပ်မှ evey app ကိုရယူပါ။
မေလ 7, 2016 မှာ 8: 24 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ဒီ ... !! ဒါကြောင့်အေးမြ♡
ဇန်နဝါရီလ 29, 2016 မှာ 11: 39 ညနေ
Shale Buzan says:
မတ်လ 5, 2016 မှာ 9: 38 ညနေ
ကြောင်းလွယ်ကူသောဦးမယ့်ဒီအရ app ကိုလိုအပ်ပါတယ်အိုးကြောင်းအရမယ့်အစားမမေးမခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာပြန်သွားပြီး download, နှင့် yeah ကြောင်းဘယ်လိုတွန်းအားပေး
မတ်လ 5, 2016 မှာ 9: 44 ညနေ
တစုံတယောက်သောသူသည်ဘယ်လိုမှတက် login မှငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
ဇန်နဝါရီလ 25, 2016 မှာ 1: 42 ညနေ
အများကြီးလည်း instagram ရုံပြီးပြည့်စုံဟုပြောဘာမျှ
ဇန်နဝါရီလ 8, 2016 မှာ 6: 35 ညနေ
ကိုယ်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ် ... က fix မှမေးလ် id..how အတွက်အမှားပြသထားတယ် ???
ဇန်နဝါရီလ 24, 2016 မှာ 9: 15 ညနေ
Jojo ?? says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2015 မှာ 4: 37 နံနက်
ဒါနဲ့ Instagram ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ငါ့အကောင့်ငါ၏နာမကို user name နဲ့ password ကိုအတူတက်သတ်မှတ်ထားတယ်ငါမှတ်ပုံတင်ပုတ်နှင့်ငါ့အီးမေးလ်ကိုကတင်စတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာအမှားကဆိုသည်မှန်ကန်သောအီးမေးလ်ကကြီးလျှင်မေးတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကငါ့အ Wi-Fi သို့မဟုတ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒေါင်းလုဒ်သုံးပြီးတယ် app ကိုဖြစ်ပါတယ်။